Fampandrosoana vokatra namboarina
Ny ekipanay mifanitsy tsara amin'ny injeniera sy mpamorona vokatra dia tsy mitsaha-mivoatra sy mahatsapa vahaolana ara-teknika vaovao. Mametraka lanja lehibe amin'ny fahaiza-manao feno sy mitombo izahay ary mazava ho azy fa mampiasa milina manara-penitra.
Ny sasany amin'ireo vokatra izay novolavolainay vahaolana dia:
Vahaolana famandrihana inductive
Charger Wireless fiara
Charger tsy misy tariby magnetika
Ary vahaolana hafa (manokana amin'ny vokatra famandrihana tsy misy tariby).
Ny kalitaon'ny vokatra rehetra dia ampiharina tanteraka mifanaraka amin'ny fepetra takiana ary nandalo fitsapana sy fanombanana ambaratonga maro.
Mandray ny dingana avy amin'ny hevitra mankany amin'ny vahaolana andiany izahay ao anatin'ny volana vitsivitsy. Noho ny fitantanana tetikasa voarafitra, afaka manatanteraka haingana ny fangatahanao koa izahay.
Mamaly mora foana ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny tsena izahay. Ny fiarahana amin'i Lantaisi ho mpiara-miasa aminao dia ahafahanao mamaly amin'ny fomba mazava ny fivoaran'ny tsena.
Ho faly izahay hikarakara ny mari-pahaizana sy fanamarinana na homologation mifanaraka amin'ny fenitra OEM.
Avy amin'ny hevitra mankany amin'ny vahaolana amin'ny famokarana ao anatin'ny fotoana fohy
Amin'ny maha mpamatsy rafitra, wwe dia mikarakara ny dingana rehetra ilaina. Ny dingana dia manomboka amin'ny fandrindrana ny tetikasa, famoahana vokatra 2D, fananganana prototype 3D, ary mitohy amin'ny fanamarinana sy fanamarinana mifototra amin'ny fepetra OEM ary mifarana amin'ny famokarana andiany. Ny dingana rehetra mamaritra ny kalitao dia vita ao Lantaisi.
Na dia efa manana hevitra mivaingana aza ianao na hevitra manjavozavo fotsiny - ny fandrindrana ny tetikasa miaraka aminay dia manomboka amin'ny fivoriana mialoha ny tetikasa amin'ny antsipiriany.
ID (Famolavolana indostrialy)
Ny injeniera mpanamboatra vokatra dia manao famandrihana vokatra mifototra amin'ny hevitry ny mpanjifa, asehoy amin'ny mpanjifa ny hevitra famolavolana ary avelao hivoatra ny hevitrao.
EVT (Fitsapana fanamarinana ny injeniera)
Aorian'ny fanekenao ny fisehoana aseho amin'ny famoahana vokatra dia hanao fanamarinana ny famolavolana izahay amin'ny dingana voalohany amin'ny famolavolana vokatra. Tafiditra ao anatin'izany ny fitsapana miasa sy fiarovana. Amin'ny ankapobeny, ny RD (R&D) dia manao fanamarinana feno ny santionany ary manao fitsapana marobe mba hiantohana ny fiarovana ny vokatra.
DVT (Fitsapana fanamarinana ny famolavolana)
Ny fitsapana fanamarinana ny famolavolana dia rohy fitiliana tsy maintsy ilaina amin'ny famokarana hardware. Hanao fitiliana bobongolo, fitiliana fampisehoana elektronika, ary fitiliana endrika. Aorian'ny famahana ny olan'ny santionany amin'ny sehatra EVT, ny haavony sy ny fotoanan'ny famantarana rehetra dia voasedra, ary vita ny fitsapana fiarovana, izay nohamarinin'ny RD sy DQA (Design Quality Assurance). Amin'izao fotoana izao, ny vokatra dia vita amin'ny ankapobeny, ary hanao proofing 3D izahay ary hanokatra ny lasitra.
PVT (Fitsapana fanamarinana ataon'ny mpanamory)
Rehefa manamafy ny mpanjifa fa tsy misy olana amin'ny habeny sy ny firafitry ny modely santionany, dia hanao fitsapana famokarana mba hanamarinana ny fanatanterahana ny asan'ny vokatra vaovao d ary hanao fitiliana fahamarinan-toerana sy azo itokisana. Tsy misy olana ny valin'ny fitsapana ary halefa amin'ny mpanjifa ny santionany.
Raha tsy misy olana amin'ny santionany, ny sampana famokarana dia afaka manatanteraka famokarana faobe ho anao amin'ny fotoana rehetra. Manana rafitra famatsiana feno izahay: fitantanana mitambatra ny atrikasa orinasa, fitaovana fikarohana sy fampandrosoana, fitaovana famokarana, fanatobiana entana ary fitaterana. Ny tanjon'ny orinasanay dia ny hahatonga ny mpanjifa tsy hanahy.